> Resource > Windows > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ka Windows 7
Waxaan ka Windows 7 Computer kaban karto, tirtiray Files?
Hey qof walba, waxaan haysan kombuyuutar waddaa Windows 7 iyo waxaan si qalad ah la tirtiro qaar ka mid ah files muhiim D: drive. Nasiib darro markii hore ayaan iyaga tirtiray ka bin qashinka iyo sidoo. Ma jiraa wax aan ka qaban karaa si aan u celinaynaa ka Windows 7 computer? Documents kuwa kale iyo sanamyo waa muhiim ii. Mahad badan.
Sida caadiga ah waxaad soo kaban karto, files tirtiray ka Windows 7 recycle bin haddii aadan weli waayay. Haddii files tirtiray ma aha in recycle bin, weli iyaga ku soo celin karaa. Dhab ahaantii, la tirtiro ama formatting aan marna masixi doono xogta ka Windows 7 computer. The files tirtiray ayaa weli ku kaydsan ee drive your computer iyo waxay kaliya calaamadee xogta sida geli karin nidaamka. In alla intii aan la overwritten by xog cusub on your computer, waxaad u soo kaban karto, files leh Windows 7 tirtiray software kabashada file.
Qaado Wondershare Data Recovery sida tusaale, barnaamijkani waxa uu caawiya in aad ka bogsato files tirtiray ka Windows 7 in hab fudud oo khatar la'aan. Qalab wuu awoodaa inuu baarista Windows 7 computer si ay u eegaan xogta si qalad ah la tirtiro. Habkaani wuxuu ku soo kabashada awood utility aad u saamaxaaya in ay ka bogsanayaan oo dhan cayn kasta oo files tirtiray ka Windows 7 computer, oo ay ku jiraan videos, sawirada, waraaqaha, files audio, emails, iwm sokow, haddii files yihiin formatted ama kharribeen on your computer Windows 7, waxaad isticmaali kartaa barnaamijka si aad u celinaynaa.
Download version maxkamadda barnaamijka inuu ka soo kabsado xogta tirtiray ka Windows 7 computer hadda!
Kabsado tirtiray Faylal ay ka Windows 7 3 Talaabooyinka
Wax First hore, tan iyo xogta lumay si fudud loo overwritten karaa iyadoo xogta cusub ku wadid aad computer ee, inaad si fiican u joojin lahaa adiga oo isticmaaleya isticmaale Windows 7 computer ama ugu yaraan ma sameeyo howlgal kasta oo ku wadid meesha faylasha aad ayaa tirtiray ka. Plus, fadlan ha soo dajiyo barnaamij ku saabsan drive asalka ah ee files aad tirtiray aad.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada ah si ay u bilaabaan soo kabashada file Windows 7 tirtiray
Burcad Wondershare Data Recovery on your computer Windows 7 iyo aad arki doonaa suuqa kala ah 3 hababka soo kabashada.
Si aad u soo kabsado xogta tirtiray ka Windows 7, aynu dooro "lumay Recovery File" mode inuu ku soo bilowdo.
Tallaabada 2 Sawirka xijaab / drive meesha files ayaa tirtiray ka Windows 7 computer
Dhammaan qoruhu / drives on your computer Windows 7 lagu soo bandhigi doonaa furmo. Dooro mid ka mid ah aad doonaysid in aad ka soo kabsado files tirtiray ka oo guji "Start" si ay u bilaabaan baar files waxa on.
Tallaabada 3 kabsado tirtiray files ka Windows 7 computer
Ka dib markii iskaanka, helay files ku wadid aad Windows 7 computer ayaa lagu tilmaami doonaa "Jidka" iyo "File Ty [e", waxaad arki kartaa magacyada file in lagu hubiyo sida badan oo files tirtiray la soo kabsaday karo.
Markaas waxaad dooran kartaa faylasha aad rabto oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya, si aad Windows 7 computer.
Fiiro gaar ah: Si looga hortago soo kabsaday xogta ka overwritten, inaad si fiican u sii lahaa ee files soo kabsaday on xijaab kale / wadato isticmaalka Windows 7 computer.